Maimaim-poana Niaraka vehivavy | Mampiaraka "Mampiaraka ny vehivavy"
Maimaim-poana Niaraka vehivavy | Mampiaraka «Mampiaraka ny vehivavy»
Ankehitriny, mora-handeha, misokatra, nahita fianarana (nahazo diplaoma avy amin’ny Anjerimanontolo telo), dia tratra foana eo amin’ny fiainana, mpivavaka, ny fitiavana ny ankizy. Ny fitiavana ny fampiononana ao an-trano. falifaly, falifaly optimist, tsara ny mahandro sakafo, toy ny filaminana, tsy fifandirana, saingy tsy afaka mitsangana fa rehefa atidoha manomboka indray ny hanabe, manova, mandidy, sns. ny Lehilahy tsy amin’ny endriny fa afa-po. Tahaka ahy, sambatra mandrakizay ara-dalàna, kafousia andro ny fiainana, rehefa tia vazivazy. Matokia ahy — ny lasopy ho tanteraka. Mangatsiatsiaka, tena izy, amin-kitsimpo lasopy. aho, Te-hahita ny olona, izay ho ho ahy eo amin’ny toerana voalohany taorian’ny Andriamanitra. Ny zava-dehibe indrindra, izy dia lehilahy amin’ny lafiny rehetra. Tsy amin’ny teny fa amin’ny asa, noho izany dia afaka otlupit azy ho an’ny rehetra ny taona manirery aho, dia ho mpitondratena aho, dia mila lehilahy matanjaka, tsy miankina, tsy volamena-mpihady, ny olona iray izay mety ho ny lohan’ny fianakaviana sy ny tsy miankina. Mahatsiaro ho tanora, mavitrika, mandeha miaraka amin’ny vondrona any an-tendrombohitra mba hankafy ny zava-boahary, ny fitiavana hihira aho hihira any amin’ny antoko mpihira, ny fitiavana ho namana ao an-trano. Tiako ny biby sy ny saka sy ny alika. Tsara fanahy, tsara, tsara tarehy, rosiana. Te lehilahy voaaro ahy avy ny oram-baratry ny fiainana, sy ny aho, hianatra ny fomba fahandro ny sakafo tianao indrindra. Eny, izaho dia mirehareha. Eny, saro-piaro aho. Eny, mpikomy. Eny, aho be di-doha. Eny, izaho no mafy loha, tena mampidi-doza. Eny, willful. Mba nahafolaka ahy. Eny, foana ny fihetseham-poko ao anatiny. Eny, izaho no izy.
Indraindray aho mangina, fa ny bibidia any, indraindray tony, indraindray entanim-pitiavana. Indraindray aho growl toy ny haza ny biby, fa izaho tsy manaikitra, dia aza mino ahy. Mamorona natiora. Manana Tantara an-kira feony. Mihira aho, dia soraty ny mozika. Manana ny famoronana asa. Hihira any amin’ny tempoly.
Ny tena fanohanana eo amin’ny fiainana ny finoana.
Fanta-daza miteny mpitsabo. Koa psikology, ny mpampianatra ny teny malagasy sy ny mozika. Fitiavana Rosia sy rosiana ny mozika, ary mpahay literatiora sy ny tantara. Tena tsara, misokatra, haingana hamela heloka, tsy mikatsaka tombontsoa eo amin’ny fifandraisana. Tiako ny ankizy, ny zanako vavy sy ny olon-kafa. Mitady lehilahy, ny hany mba ho vadiny. Mila tsara fanahy, manan-tsaina, hihaino tsara sy ny malemy fanahy ny olona, misokatra sy ny marary, izay tsy miova, kokoa Ortodoksa, izay ao amin ‘ny toetry ny tena fitiavana, fa tsy ny mpisotro, tsy misy herisetra, izay ho toy ny vato wall’ — ny, izay dia matokia ary iza no ho afaka miantehitra
← Ny lalao ho an'ny zazavavy
Chatroulette maimaim-POANA Tsy mila Fisoratana anarana, ny italiana →